कोभिड अस्पताल बनाइँदै- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
पर्सा — वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा ६६ शय्याको कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल निर्माण हुने भएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. वीरेन्द्र प्रधानका अनुसार, केन्द्रले अस्पताल निर्माणका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ ।
टेन्डर प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेकाले छिट्टै थालिने उनले दाबी गरे । ‘तत्काललाई ७० फिट चौडाइ र १ सय १० फिट लम्बाइ भएको अस्पताल भवनको भुइँतला निर्माण हुनेछ,’ उनले भने, ‘पछि तीनतले भवन निर्माण हुन सक्ने खालको बनाइँदै छ ।’ यो कक्षमा वयस्क कोभिड बिरामीहरूको उपचार हुने डा. प्रधान बताउँछन् ।
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा समेत वीरगन्ज हटस्पट बनेको र यहाँ बारा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीसम्मका कोभिड बिरामी आउन गरेकाले कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको आवश्यकता महसुस भएको उनले बताए । अस्पतालका कोभिड कोअर्डिनेटर डा. उदयनारायण सिंह भवन बने बिरामीहरू निजी अस्पतालमा जान नपर्ने र आर्थिक व्ययभार घट्ने बताउँछन् । ‘सरकारी अस्पतालबाटै बिरामीले विश्वसनीय तथा सस्तो र सुलभ उपचार पाउनेछन्, हाल निजी अस्पतालहरूले कोभिड बिरामीको उपचारमा चर्को शुल्क लिइरहेको जनगुनासो पनि हट्नेछ,’ उनले भने ।
कोरोनाको तेस्रो लहर आए बालबालिका बढी प्रभावित हुने स्वास्थ्यविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसैले अस्पतालमा बाल सघन चिकित्सा इकाई (पीआईसीयू) को व्यवस्थासमेत भइसकेको डा. सिंहले बताए । दुई साताअघि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले अस्पतालमा निर्माण गरिदिएको पीआइीसीयूको उद्घाटन भएको हो । उक्त कक्ष ३० शय्याको छ ।
प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०९:२९
गुणस्तरहीन सडक भन्दै विरोध
स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि निर्माणको काम रोकिएको छ
सल्यान — मोख्ला–दमाचौर हुँदै रोल्पाको झ्याम जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि निर्माणको काम रोकिएको छ । सडकमा ग्राभेलका नाममा माटो मात्र हालिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि स्तरोन्नतिको काम रोकिएको हो ।
सडक निर्माण गुणस्तरहीन भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका सल्यानको मोख्ला र दमाचौरका बासिन्दा । तस्बिर : कान्तिपुर
ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै स्थानीयले ठाउँठाउँमा नाला भत्काएका छन् । उनीहरूले सडक निर्माणमा खटिएका प्राविधिकलाई समेत हातपातको प्रयास गरेका थिए । पूर्वाधार विकास कार्यालयले उक्त सडकको ५ किमि खण्ड स्तरोन्नति गर्न ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसका लागि गत वर्ष साउनमा टेन्डर भएको थियो । कार्यालयले सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा बागेश्वरी कन्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई दिएको छ ।
ठेकेदारले इस्टिमेटअनुसार काम नगरी माटो मात्रै हालेकाले सडकमा यातायात सेवा बन्द भएको स्थानीय कमल शर्माले बताए । उनका अनुसार दुई महिनाअघि ग्राभेल हालिएको सडक हिलाम्य बनेको छ । नाली गुणस्तरहीन हुँदा खेतबारीमा भल पसेको उनले बताए । ‘ठेकेदारले सडकमा गिट्टी–बालुवा नै नराखी माटो मात्र पटान गरे,’ उनले भने, ‘जसका कारण दुई महिनामै सडक काम नलाग्ने भएको छ ।’ उनले ठेकेदारले रकम सिध्याउन झरीमा समेत काम गरिरहेको आरोप लगाए ।
निर्माण कार्यमा संलग्न प्राविधिक र ठेकेदारको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम भइरहेको बाग्चौर नगरपालिका–१० का शेरबहादुर बुढाथोकीले बताए । ‘धेरै वर्षको संघर्षपछि सडकमा बजेट पर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर कामै नगरी रकम पचाउने नियत देखियो ।’ गुणस्तरयुक्त काम गर्ने प्रतिबद्धता नगर्दासम्म ठेकेदारलाई काम गर्न नदिइने उनको भनाइ छ । उनले बजेट अपुग भएमा आफूहरू श्रमदान गर्नसमेत तयार रहेको बताए ।
स्थानीयको विरोधपछि सडक निर्माणको काम रोकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विनोदक्मुार पुनले बताए । उनका अनुसार ठेकेदारले पहिलो चरणको कामअनुसार सडकमा माटो हालेर खाल्डाखुल्डी पुरेका हुन् । नाली बनाउने काम पनि जारी रहेको बेला स्थानीय विरोधमा उत्रिएको उनको भनाइ छ । स्थानीयको सहमतिपछि काम सुचारु गरिने उनले बताए । अहिलेसम्म सडकमा करिब ४० प्रतिशत काम सकिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०९:२६